Maarso | 2008 | WEEJIDOW
Ciidamo Ethiopian ah Oo ka soo baxay Maanta Magaalada B/Weyne kuna sii jeeda degmada Buula burde ee Gobolka Hiiraan.
Maarso 31, 2008
Ciidamo Ethiopian ah oo ka soo ruuqaadsaday xerada Jande kundisho ayaa waxa ay ku sii jeedaan dhinaca iyo degmada Buula burde ka dib markii maanta uu ka dhacay dagaal culus oo gacan ku haynta degmada ay la wareegeen ciidamada Midawga Maxkamadaha Islaamka.Wararka Caawa naga soo gaarayo magaalada B/Weyne ee Gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Ethiopia ee fariisinka ku leh xerada Jande kundisho ay ka soo amba baxeen iyagoo ku sii jeeda degmada Buula burde ee Gobolka Hiiraan.
Dadka deegan degmada Buula Burde ee Gobolka Hiiraan ayaa Caawa waxa ay ka wal walsan yihiin ciidamada Ethiopia ee ku soo food leh sida la sheegay degmada Buula burde xili kooxaha ka soo horjeeda DFKM ay ku sugan yihiin degmada, waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in ay ka cabsi qabaan in uu dagaal markale uu ka qarxo degmadaasi.
Dhinaca kale Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Yuusuf Daba geed, ku xigeenka dhinaca amaanka ee Maamulka Gobolka Sh/Dhaxe Maxamed Cumar Jaandhay iyo Mas’uuliyiin kale oo gacan ku haynta degmada ay kala wareegeen dagaalyahanada Maxkamadaha Islaamka ayaa waxa ay gaareen deegaanka Yasoooma oo 135 KM u jirta degmada Buula Burde ee Gobolka Hiiraan.
Ruushka: Dad God gudihiis Muddo 5 bilood ah ku jiray ayagoo ka cabsi qaba Yaamul Qiyaamaha in uu dhaco
Dad isugu jira rag, haween iyo caruurba ayaa muddo shan bilood ah ku hoos noolaa God ku yaal dalka Ruushka, ayagoo markaasi ka cabsi qaba in uu dhawaan dhaco Yaamul Qiyaamaha.
Dadkan oo aamisan in Yaamul Qiyaamaha ama dhamaadka dunida ay kusoo began tahay bisha May ee soo socota ayaa qaarkood waxay bilaabeen in ay halkaasi isaga soo baxaan, halka in kalena ay weli cabsi dartii ku nool yihiin God weyn oo ku yaal buuraleyda gobalka Penza oo 500km dhinka koonfur bari ka xiga magaalada Caasimada ah ee Moskow.
Kooxdan oo kamid ah Kaniisad Masiixi ah oo la baxay Masiixiyiinta Rasmiga ah ee Ortodokska ayaa waxaa hogaaminaya nin lagu magacaabo Pyotr Kuznetsov oo sheegtay inuu yahay nabi lasoo diray.
Mr. Pyotr Kuznetsov ayaa hada lagu hayaa Isbitaal lagu xanaaneeyo dadka waalan, balse waxaa weli godka gudihiisa ku nool 28 ruux oo uu horey halkaasi u geliyey asagoo ka dhaadhiciyey in ay goobtaasi ku noolaadaan inta uu ka dhacayo Yaamul Qiyaamaha oo uu sheegay in uu dhacayo bartamaha bisha May ee 2008.
Booliiska dalka Rashiya ayaa ka gaabsaday in ay si xoogleh u galaan godkaasi ay dadka ku jiraan, ayagoo ka cabsi qaba in godkaasi uu burburo, maadaama ay qeybo kamid ah godadkaasi ay horey u burburiyeen biyo halkaasi galay.
Booliiska ayaa sidoo kale goobta uu godkaasi ku yaal keenay ninka dadkaasi duufsaday ayagoo ku cadaadiyey ninkaasi inuu dadkaasi markale ka dhaadhiciyo in ay halkaasi isaga soo baxaan.
Illaa iyo hada waxaa halkaasi kazoo baxay Jimcihii lasoo dhaafay 7 haween ah oo kamid ahaa dadkii halkaasi horey ugu jiray ayadoo ay weli godka gudihiisa ay ku jiraan in ka badan 20 rag, haween iyo caruurbaleh.
Mr. Oleg Melnichenko oo ah Guddoomiye kuxigeenka gobalka Penza ayaa saxaafadda u sheegay in ay wadaan wadahadal ay kula jiraan dadkaasi asagoo sheegay in aysan dooneyn in ay dadkaasi khiyaameeyaan, balse doonayaan in ayagoo aaminsan waxa loo sheegayo ay halkaasi iskood uga soo baxaan.
Dadkan ayaa ku noolaa godkaasi hoostiisa muddo bilo ah ayadoo markii danbe ay ka warheleen maamulka gobalka Penza ee dalkaasi Ruushka.
Baydhabo waxaa ka socda shirqool la doonayo in lagu rido Nuur Cadde, waxaana ka danbeeya C/llaahi Yuusuf (Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka)
Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee ku sugan Baydhabo ayaa u soo gudbiyey shir guddoonka baarlamaanka mooshin loogu yeerayo raisul wasaaraha xukuumada federaalka Nuur Cadde in uu baarlamaanka ku horyimaado muddo goán, si wax looga weydiiyo arrimo ku saabsan dedaalada dib u heshiisiinta ah ee uu wado & arrimo kale oo dhinaca dhaqaalaha & nabadgelyada quseeya.
“Waxaa baarlamaanka shalay la hor keenay mooshin loogu yeerayo Nuur Cadde, waxaana mooshinkaasi la xisaabtanka xukuumadda Nuur Cadde keenay 25 xildhibaan, xittaa axdigu ma qabo in tiro intaas la’eg mooshin ay keenaan in laga doodo, markii la weydiiyey sababta u yeeritaanka Nuur Cadde, waxey sheegeen in wax laga weydiinayo sicir bararka Muqdisho ka jira, waxey xittaa ku dhici waayeen in ay yiraahdaan, war dadkaan shacabka ah ee macna darrada loo xusuuqayo aan bal wax ka weydiino cidda ka danbeysa, & in aan ka baarlamaan ahaan ka xunahay, waxaana xildhibaanada mooshinkaasi keenay ay ka gows haysteen C/llaahi Yuusuf oo sidaas in ay sameeyaan amar ku siiyey, guddoomiyaha baarlamaankuna waa nin markii horeba meesha loo keensaday in wixii la doono laga dhammeysto” ayuu yiri Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo naga codsaday in aanan magaciisa la xusin sababo la xiriira ammaankiisa darteed, wuxuuna intaasi raaciyey.
“Baarlamaanka sheeganaya in ay wakiilo ka yihiin shacabka, ee weligood aan hal maalin soo qaadin xusuuqa shacabka Muqdisho lagu hayo, qofkii waxgarad ah wuu garan karaa, waxa ay yihiin, sida dhabta ahna, waa annaga oo dhan in aan Itoobiya (manoply) ugu jirno, xittaa C/llaahi Yuusuf waa nin la haysto oo wixii loo yeeriyo sameynaya, waxa aan ku kaceyno waa wax qof xittaa dhibic damiir lihi isu quurin”.
War Deg Deg ah: Xoogag ka amar qaata Maxkamadaha Islaamka oo la wareegay gacan ku heynta Degmada Buulo-Burte
War deg deg ah oo naga soo gaaray Degmada Buulo-Burte ayaa wuxuu sheegayaa in Dagaalkii Degmadaas ka socday ilaa sakaa ay ugu dambeyntii ku awood roonaadeen Xoogag ka amar qaata Maxkamadaha Islaamka.
Warku wuxuu intaas ku darayaa in ay Degmada gebi ahaanba isaga baxeen Ciidamadii beryahan ku sugnaa ee ay wateen Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Yuusuf Dabageed) iyo Guddoomiye ku xigeenka Gobolka Shabeelaha Dhexe Axmed Cumar Xabeeb (Jaandhaay), kuwaasi oo aan ilaa iyo haatan la ogeyn meel ay aadeen.Yuusuf Dabageed iyo Axmed Jaandhaay oo beryahan ku suganaa Degmada Buulo-Burte ayaa waxay sheegeen in sababta ay isugu tageen Degmadaas ay tahay sidii ay deegaanno ka tirsan Gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe uga sifeyn lahaayeen Kooxo ka soo horjeeda Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Mas’uuliyiinta labada Gobol iyo Ciidamada ay wataan ayaa waxay gaareen Degmada Buulo-Burte kadib markii Xoogag ka amar qaata Maxkamadaha Islaamka ay waqti kooban la wareegeen Degmooyinka Beledweyne iyo Jowhar ee Gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe.
Ugu dambeyntiina, waxaa jira dhaqdhaqaaq ay wadaan Ciidamo Itoobiyaan ah oo ku sugan duleedyada Degmada Beledweyne, kuwaasi oo la sheegayo in ay doonayaan inay u dhaqaaqaan dhinaca Degmada Buulo-Burte oo ay gacan ku heynteeda la wareegeen Xoogag ka soo horjeeda Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Buur-hakaba: Maamulka Degmada Buur-hakaba oo sheegay in wax ka qabanayaan kooxaha burcada ee isbaarada dhigata.
Maamulka degmada Buur-hakaba ayaa u hanjabay kooxaha burcada ee beryahan dhibaatada ka wada inta u dhaxeeya Buur-hakaba iyo Wanla-weyn, kuwaasoo shalayna rasaaseeyay gaari uu la socday mudane ka tirsan baarlamaanka.
Mas’uuliyiinta maamulka deegaanka ayaa waxay sheegayaan in ay bilaabi doonaan howl gal ballaaran oo ay wax uga qabanayaan kooxaha burcada ee dhibaateeyay dadka ku safra wadada isku xirta deegaanadaas.
Kooxahan ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay waxay dil, dhac iyo dhaawacba u geysanayaan dadka ku sii jeeda magaalada baydhabo, waxaana dhaawacyo ay gaarsiiyaan mudane ka tirsan baarlamaanka, markii ay rasaas la beegsadeen xilli uu marayay wadada isku xirta wanla-weyn iyo Buur-hakaba.
Maamulka Degmada ayaa ka codsaday Dowladda Federaalka in ay usoo dirto ciidamo kala qeyb qaata sugida ammaanka deegaanadaas, si howl galka wadadaas ka fulinayaan u noqdo mid mira dhala.
Muqdisho: Madaxweynaha Soomaaliya oo cafis u fidiyay Maxaabiis ku jirtay Xabsiga Dhexe.
Madaxweynaha Jamhuuriyada soomaaliya cabdulaahi Yuusuf Axmed ayaa maanta cafis u fidiyay maxaabiis ku jirtay xabsiga dhexe ee Magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa cafiska tiro ka mid ah Maxaabiista ku xiran xasiga dhexe ku sheegay mid qeyb ka ah dadaalada dib u heshiisiinta ee Dowladda soomaaliya wado.
Munaasabad Maxaabiistaasi lagu sii deynayay oo ka dhacday Xarunta Madaxtooyada ayuu Madaxweynuhu ugu baaqay maxaabiistaas in ay ka shaqeeyaan nabad gelyada iyo dib u heshiisiinta.
Afhayeenka Xukuumada Cabdi Goobdoon oo saxaafada uga waramay sii deynta Maxaabiistaas ayaa sheegay in cafiska maxaabiista uu u fidiyay madaxweynaha ay ku timid kulamo ay ka yeesheen Golaha Wasiirada iyo Madaxweynaha.
Waxaa uu sheegay in maxaabiista la daayay ay ahaayeen kuwo fal dambiyeedyo kala duwan lagu soo qabtay, hase ahaatee iminka la cafiyay.
Tirada Maxaabiista ayuu ku sheegay in ay gaarayaan ilaa 7maxbuus oo aanu cadeyn waxyaabihii loo soo xiray.
Tallaabada lagu sii daayay maxaabiista ayuu ku sheegay in ay qeyb ka tahay howlaha dib u heshiisiinta ee ay Xukuumada garwadeenka ka tahay.
Ma ahan markii u horeysay ee uu Madaxweynaha cafis u fidiyo maxaabiis, waxaana ay aheyd sanadkii hore markii madaxweynuhu sidan oo kale uu cafis u fidiyay maxaabiis laga soo qabtay dagaaladii dhex maray dowladda iyo maxkamadihii islaamiga.
War Deg dEg ah: Odayaasha Degmada Afmadoow oo si kulul uga hadlay Maamul u sameeynta Juba land.
Wax Garadka iyo Odayaasha Degmada Afmadoow ee gobolka J/hoose ayaa si kulul uga hadlay Qadiyada Maamul u sameeynta Juba land.Xubanahin ka soo jeeda magaalada Afmadoow iyo deegaanada hoos taga ayaa si kulul uga hadlay hadal heeynta la xiriirta maamul u sameeynta Jubaland oo maalmihii u danbeeyay la isla dhex marayay Guud ahaan gobolada Jubooyinka gaar ahaan Magaalada Kismaayo.
Ugaasi Cabadi Saabir oo ka mida Xubno odaydhaqameed ku sugan degmada Afmadoow ee Gobolka J/hoose ayaa in maamul u sameeyn looga baahan yahay goobolada juboojinka baalse ay haboontahay buu yiri in laga wada hadlo isla markaana ay kuwada hishiiyaan dhamaan beelaha wada dega halkasi.
Sidoo kale ugaaska ayaa waxaa uu ugu baaqay dowlada KMGS in ay soo faro galiso arimahaani maadaama ay iyadu maamusho guud ahaan Dalka.
Hadal heeynta maamul u sameeynta gobolada Jubooyinka ayaa waxaa la sheegay I ay wadaan xumno uu ka mid yahay Xildhibaan Bare Aadan Shire (Bare Hiiraale) kuwasi oo dhawaanaha u tagay magaalada Kismaayo arimo la xiriira arintasi.
WAr Deg Deg ah: Qarax ka dhacay degamada luuq Ee gobolka Gedo iyo Masuuliyiin ciidamada Ethiopia ay xireen oo la sii daayay
Qarax xoogan ayaa waxaa uu ka dhacay Degmada Luuq ee gobolka Gedo kaasi oo ay ku dhaawacantay haweeneey ku sugneeyd agagaarka masjidul Raxma oo ku yaal bartamaha Degmada Luuq ee gobolkaasi.Illa iyo hada lama yaqaan Sababta dhabta ah ee ka danbeeysay qaraxani saaka ka dhacay degamda luuq sidoo kale mana jirto cid loo qabtay in ay ka danbeeysay Qaraxaasi oo loo qabtay in ay ka danbeeyeen qaraxaasi.
Ciidamada Ethiopianka iyo Kuwa Somalia ah ee ku sugan halkasi ayaa waxaa ay durbaba bilaabeen dhaqa dhaqaaq ku aadan in ay soo qabtaan cida ka danbeeysay qaraxaasi oo ah mid aan waligii nuuciisa oo kale ka dhicin halkaasi.
Dhanka Ugaas Biloow Xasanoow Xeeydar iyo Taliyihii Saldhiga Degmada Luuq Siyaad Cabdi kariin oo ay ciidamada Ethiopianka ee ku sugan halkaasi ay saaka xabsiga u taxaabeen ayaa la sii daayay kadib markii odayaasha iyo xubno ka tirsan wasaarada Arimaha gudaha ee DKMG ay dedaal dheer u galeen sidii loo sii deeyn lahaa masuuliyiintaasi.
Taliyaha Saldhiga Degamada Luuq Siyaad Cabdi Kariin oo Waajidpress u waramayay ayaa sheegay kadib markii la soo daayay in xarigiisa iyo ugaaskaba ay ka danbeeyeen gudomiyaha Degmada Luuq.
Xaaladahani ayaa waxaa ay ku soo beegmayaa xili dhawaan maamul cusub loo sameeyay degamada luuq ee gobolka Gedo iyadoo dadka deegaankasi ay ku tilmaameen in dhibaatooyinkani ay ka danbeeyeen qilaafka isa soo taray ee ka taiga maamulka Degmadaasi.
Jen. Cadde Muuse oo Ethiopia ka dalbaday Ciidamo ka qeyb qaata sugida ammaanka shidaal qodista laga sameynayo Puntland
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Puntland Jen. Cadde Muuse Xirsi ayaa Dalka Ethiopia u jooga wada hadalo uu la leeyahay Maamulka Addis Ababa, kaas oo ku aadan shidaal qodista deegaanada Puntland dhowaan laga hergelinayo.
Cadde Muuse ayaa dadaal ugu jira socodsiinta shidaal laga baaro Deegaanada Puntland, taasoo caqabado ay kala hor imaanayaan maamulkiisa iyo dadka deegaanada.
Jen Cadde oo saaxib dhow la ah Dowladda Ethiopia ayaa ka dalbaday Madaxda Ethiopianka in ay ugu yaboohaan Ciidamo gaar ah oo ka qeyb qaata sugida ammaanka deegaanada laga fulinayo shidaal qodista.
Ilo ku dhow dhow ah xafiiska Madaxweynaha Puntland ayaa sheegaya in dhowr maalmood uu ku sugnaan doono Magaalada Addis Ababa, waxaana wada hadalo uu arrimahaas kala yeelan doonaa Dowladda Ethiopia.
Puntland oo culeys adag ka heysta dhinaca Somaliland iyo kooxaha kale ee kacdoonada ka wada dalka Soomaaliya ayaa bilaabaya bartamaha sanadkan shidaal qodis laga fuliyo deegaanadeeda, xilli Dowladda Soomaaliya ku gacan seyrtay qorshaha Baarlamaanka Puntland ku ansixiyay batroolka.
Saraakiil ka socota Shirkad caan ah oo lagu magacaabo African Oil ayaa ku sugan Magaalada Boosaaso, waxaana shirkadaas dhowana heshiis la galay Madaxweynaha Puntland oo ku aadan shidaal ay ka baarto Deegaanada Puntland.
Ra’iisal wasaaraha DFKM Nuur Cadde oo la kulmay W/Arimaha Dibada ee Dalka Saudiga Amiir Faysal
Riyad :-Ra’iisal wasaaraha DFKM Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde ayaa magaalada Riyad ee dalka Sacuudi Arabia kula kulmay mas’uuliyiin ka tirsan wadankaasi.
Nuur Cadde iyo wafdi uu horkacayo ayaa habeen hore gaaray magaalada Riyad ee dalka Sacuudiga ayaa waxay la kulmeen mas’uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudiga Amiir Sacuud Alfeysal.
Intii uu socday kulankaasi, Ra’iisal wasaare Nuur Cadde iyo wafdigiisa waxay mas’uuliyiinta Sacuudiga u bandhigeen dadaalka dib u heshiisiinta ee ay waddo DFKM ah iyo sida ay u dooneyso dowladdu in boqortooyadu ay kaalin fir fircoon ka qaadato dadaalkaasi.
Nuur Cadde wuxuu Sacuudi Arabia ka codsaday inay kulamo la yeelato mucaaradka ka soo horjeeda dowladda iyo inay is arkaan dalalka arrimaha Soomaaliya ku lugta leh si ay u suurogasho in si wadajir ah loogu tallaabsado ka miro dhalinta hawsha dib u heshiisiinta.
Ra’iisal wasaaraha DFKM Nuur Xassan Xuseen Nuur Cadde wuxuu horey u sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay soo dhoweynta dadaal kasta oo lagu wadahadalsiinayo iyaga iyo kooxaha mucaaradka si loo hello siyaasad mideysan oo lagu hago dalka Soomaaliya.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Maarso, 2008.